Fikradaha ku saabsan ereyga Eebbe, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Maxaad u malayn erayga Ilaah?
Markuu saaxiib la hadlo iyaga Ilaah, maxaa maskaxda ku soo dhaca? Miyaad ka fekereysaa qof cidlo ah oo jannada ku jira? Ma qiyaastay nin duq ah oo gadhka cad iyo qulqulaya cad? Mise agaasime ku habboon kiiska ganacsiga madow, sida ku cad filimka "Bruce Ilaaha Qaadirka ah"? Mise sawirkii George Burns wuxuu ahaa nin waayeel ah oo xiran shaati Hawaiian ah iyo kabo tennis ah?
Dadka qaar waxay aamminsan yihiin inuu Ilaahay si firfircoon ugu lug leeyahay noloshooda, halka kuwa kalena ay u arkaan in Ilaah yahay meel cidlo ah oo fog, oo aan meel kale joogin oo na daawanaya "meel fog". Ka dib waxaa jira fikirka ilaah aan awood lahayn kaasoo ah midkeen, "sida qof qalaad oo saaran baska isku dayaya inuu helo gurigiisa," sida ku jirta heesta Joan Osborne.
Ka fikir Kitaabka Quduuska ah inuu Ilaahay ugu sharraxayo inuu yahay garsoore adag oo siiya abaalmarinno iyo ciqaab - inta badan ciqaab - qof kasta oo ku saleysan sida aad ugu noolaan jirtay heerkaaga sare ee nolosha kaamilka ah. Masiixiyiin badan ayaa sidan uga fikiraya Ilaah - oo ah nin naxariis badan - Aabe naxariis badan oo diyaar u ah inuu baabi'iyo qof kasta ilaa wiilkiisa naxariis iyo naxariis leh uu talaabo u qaado si uu naftiisa u siiyo dadka qaldan. Laakiin taasi waa iska cad maaha aragtida kitaabiga ah ee Ilaah.
Sidee bay Baybalku u matalaa Ilaah?
Baybalku wuxuu soo bandhigayaa run ahaantii maadaama Eebbe yahay muraayadaha: "Muraayadaha Ciise Masiix". Sida ku xusan Kitaabka Quduuska ah, Ciise Masiix waa muujinta kaliya ee kaamilka ah ee Aabbaha: «Ciise wuxuu ku yidhi: Miyaan kula joogay waqti dheer, oo aadan aqoon maysid, Filiboso? Kii i arka wuxuu arkaa aabbaha. Marka sidee u leedahay: "Noo tus aabaha?" (Yooxanaa 14,9) Warqadda Cibraaniyada waxay ku bilaabataa ereyada: "Ka dib markii Ilaah marar badan iyo awoodoodii awowayaasheen kula hadlay nebiyadii, maalmihii ugu dambeeyay wuxuu nagula hadlay wiilkiisii ​​uu dhaxlay dhaxalka. ku saabsan wax kasta oo uu dunida ku sameeyey. Isagu waa muujinta ammaanta ammaanta iyo suuradda dabeecadiisa, wax walbana ereygiisa xoog buu ku qaadaa, oo wuxuu ku dhammeeyey daahirinta dembiyada, oo wuxuu fadhiyey midigta haybaddiisa sare. (Cibraaniyada 1,1: 3).
Haddaad rabto inaad ogaato waxa Ilaah yahay, fiiri Ciise. Injiilka Yooxanaa wuxuu inoo sheegayaa in ciise iyo aabuhu mid yihiin. Haddii Ciise yahay qabow, samir, iyo naxariis - oo isaguna - markaa isaguna waa Aabbaha. Oo weliba Ruuxa Quduuska ahu soo diray Aabbaha iyo Wiilku, kaas oo Aabbuhu iyo Wiilku inagu dhex jiro, oo uu nagu hoggaamiyo runta oo dhan.
Ilaah ma kala fogeeyo oo isma haysto, waa kii inaga fog fog wax naga ilaaliya. Ilaah had iyo goor waa mid ku xidhan, dareenkiisa iyo dareenkiisa ku xidhan abuurkiisa iyo abuurkiisa daqiiqad kasta. Adiga, tan micnaheedu waa in Ilaah, Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ahi kugu yeedhay jacayl oo uu kugu jeclaaday jidka madax furashada ee noloshaada oo dhan. Wuxuu kugu hageyaa inuu kugu hago ujeeddada ugu dambeysa, nolosha weligeed ah isaga oo aad ka mid tahay carruurta uu jecel yahay.
Markaan qiyaaso Ilaah qaab Kitaabka Quduuska ah, waa inaan ka fikirnaa Ciise Masiix, oo ah muujinta ugu wanaagsan ee Aabbaha. Bini-aadamka oo dhan - oo ay ku jiraan adiga iyo aniga - waxaa lagu soo daray Ciise Masiix xagga xidhiidhka jacaylka iyo nabadda ee ku xidha Ciise Aabbaha. Aynu baranno inaan runta ku aqbalno si xamaasad leh, maxaa yeelay, carruurtiisii ​​Masiixa ku jirtay, ayaa horay noo sameeyay.